ကျော်မျိူးထွန်း – မြန်မာတောင်သူများအကြွေး အရန်စပါးပြသနာနှင့် ဗဟိုကုန်စည်ဖလှယ်ဒိုင်ကြီး (အပိုင်း-၁) | MoeMaKa Burmese News & Media
အထက်ပါပြသနာများ အားလုံးသည် ဖြေရှင်းချက် တစ်ခုတည်းပေါ်တွင် ရှိနေပါသည်။ လွန်စွာမှ အံ့သြမိသည်မှာ စိုက်ပျိုးရေး တောင်သူလယ်သမား ၆၀% ကို အခြေခံပြီး စီးပွားရေး တည်ဆောက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံမျိုးတွင် ထိရောက်သော ဖြေရှင်းချက်ကို မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကမှ ယနေ့အထိ ချပြနိုင်သေးခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။* ပို၍ လွန်ကဲစွာ အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ ထိုဖြေရှင်းချက်ကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားနိုင်ငံများစွာ တွင် အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်လွှားဖြေရှင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပြီး ထိုစနစ်၏ ၇၀% လောက်ကို ကူးချပြီး ၃၀%လောက်ကို မိမိတိုင်းပြည်အနေအထားနှင့် အညီ ပြုပြင်ပြီး အသုံးချခြင်းဖြင့် ယနေ့ ရင်ဆိုင်နေရသော တောင်သူလယ်သမား အကြွေးနှင့် ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင် ပြသနာတော်တော်များများကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။* လူ့ဘဝ အခြေခံကသည်ပင်လျှင် ယခင်က လက်ခံထားသော အတွေးတစ်ခု ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို ရုတ်တရက် ပြောင်းရန် ခက်ခဲပါသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလွဲရန် သင်ယူမှုအသစ်များလုပ်ရန် များစွာလိုအပ်နေသော အချိန်ကာလ ဖြစ်နေပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အိုင်စတိုင်း ပြောခဲ့သော မှတ်သားစရာ စကားလေးကို ဤနေရာတွင် ကိုးကားလိုပါသည်။ “ရူးသွပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လုပ်နေကျ အလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေပြီး တစ်မူးခြားသော ရလဒ်ကို မျှော်လင့်နေခြင်း” ကို ခေါ်ပါသည်။ Insanity is doing the same thing over and over again and expect different results.
* ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်သည့် သူဌေးကြီး ဝါရင်းဘူးဖတ် သည် နာမည်ကြီးလုပ်ငန်းများတွင် အရင်းအနှီး ထည့်ဝင်ပြီး (သို့) ထိုလုပ်ငန်းများ၏ အစုရှယ်ယာ (Stock) ကိုသာ ဝယ်ယူသည်ဟု နာမည်ကြီးပါသည်။ ဥပမာ သူသည် ကိုကာကိုလာ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ အများကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဝါရင်းဘူးဖတ်က “Moat” (မုန့်) ရှိသည်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ပါသည်။ “မုန့်” ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ ရဲတိုက်တစ်ခု ဘေးပတ်လည်တွင် အကျယ်ကြီး တူးထားပြီး ရေနက်နက်ဖြည့်ထားသော မြောင်းကို ခေါ်ပါသည်။
* သို့သော် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတောင်သူလယ်သမားများ ထုတ်လုပ်သော လယ်ယာထွက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများမှာ “မုန့်” မရှိကြပါ။ ထိုအမှတ်တံဆိပ် ကုန်ချောပစ္စည်းများ၏ သဘောသဘာဝနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏ သဘာဝကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျွန်တော်တို့ တောင်သူများသည် ဈေးနှုန်း၏ ပြသနာကို ခေါင်းငုံ့ခံနေရသော သဘောသဘာဝတွင် ရှိနေပါသည်။
* တဖန် သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်လျှင်လည်း အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးသော ဈေးနှုန်းအတက်အကျကို ကာကွယ်ပေးသည့် စနစ်အားလုံးနီးပါးလိုလိုမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ပေး။ တဖန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကြာမီက လာရောက်ခဲ့သော ကမ္ဘာကျော် နိုဗယ်ဆုရ စီးပွားရေးပညာရှင် စတစ်ဂလေစ်ကလည်း သူ၏ ၁၉၈၁ခုနှစ် The theory of commodity price stabilization:astudy in the economics of risk – David M.G. Newbery and Joseph E. Stiglitz တွင် အစိုးရများ၏ အရန်ကုန်ထားရှိပြီး သီးနှံဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်အောင် ထိမ်းသိမ်းခြင်းများ မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
(၇) တောင်သူလယ်သမားများအတွက် “မုန့်”
* ထိုသို့ အတက်အကျ ကြမ်းသော ဈေးနှုန်းများကို သက်သာစေသော အနောက်နိုင်ငံများ၏ ဈေးကွက်အခြေခံ ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်စနစ်မှာ (တောင်သူလယ်သမားများအတွက် “မုန့်”) ကို ဗဟို ကုန်စည်ဖလှယ်ဒိုက်ကြီး (Commodities Exchange Center) ဟု ခေါ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်တော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရသော ဈေးနှုန်းဒဏ် (Price Risk) ကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် စနစ်မှာ ကုန်စည် ဒိုင်ကြီး စနစ် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အစိုးရနီးပါး လက်ခံလာကြပါသည်။